မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး
Posted by kai on Aug 1, 2011 in Money & Finance, Think Tank | 16 comments
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက မြို့နယ်တွေမှာ လူတန်းစားအများစုက ၀န်ထမ်း (အစိုးရ၊ ကုမ္ပဏီ၊ အရောင်းဆိုင်) စသဖြင့် သူတစ်ပါးဆီမှာ လခစားလုပ်နေရတဲ့သူတွေများပါတယ်။ ပျှမ်းမျှလစာက တစ်ဦးကို ငါးသောင်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့လူကုန် အလုပ်လုပ်နိုင်ရင် မသိသာလှပေမယ့် တစ်ဦးလစာကို အများက မှီခိုစားသောက်နေရရင်တော့ ဒုက္ခရောက်တာပဲ။
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် မတတ်နိုင်လို့ ချေးငှားရင်း ဆင်းရဲသံသရာလည်နေကြတယ်။
ဆင်းရဲမှုပပျောက်အောင် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေကို မြင့်တက်အောင်လုပ်ရမလား ?
အသုံးစရိတ်တွေကို ကျသွားအောင် လုပ်ရမလား ?
မြို့ပြနေ လူတန်းစားတွေမှာ အပြင်ပန်းဟန်လုပ်ပြီး ၀တ်စားပြနေပေမယ့် မီးဖိုချောင်သွားကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ပျက်ချင်စရာ၊ သနားချင်စရာ …
မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို အမြန်လျော့ချနိုင်ပါစေလို့ ………
ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟချက်ကြီးနေတာကို ဆွဲမစိနိုင်ရင်တောင် ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေကို သက်သာချောင်ချိအောင်လုပ်နိုင်ရင် အဆင်ပြေမယ်
အရမ်းကြီးလုပ်ရခက်မယ့်ဟာမျိုးမစဉ်းစားဘဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကို စဉ်းစားတာပိုထိရောက်မယ်ထင်တယ်
ကောင်းလွန်းတာကြီးစဉ်းစားပြီး မလုပ်နိုင်ရင်၊ တကယ်လုပ်ဖို့မလွယ်ရင် အချိန်ကုန်လူပန်းတာပဲ အဖတ်တင်မယ်
သခင်နုရဲ့ ပြည်တော်သာစီမံကိန်းကြီး ပျက်ရတဲ့ အကြောင်းက ကိန်းဂဏန်းစာရင်းဇယားတွေ အမှန်အကန်မရှိလို့ဖြစ်ရတာဆိုရင်ယုံနိုင်မလား။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံကနေ ပုံတူးကူးခဲ့တဲ့ မဟာစိမံကိန်းကြီးက (ရိုက်စား၊ အမြတ်ထုတ်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တွေ အလျင်းကင်းခဲ့တာတောင်) သက်ဇိုးမရှည်ခဲ့ရှာပါဘူး။ ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုက လည်းအကြောင်းတခုပေါ့။ နိုင်ငံရေးသြဇာလွန်ဆွဲပွဲမှာ အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီး ရေစုံမြောခဲ့ရပါတယ်။ ဦးကျော်ညိမ်း (တည်မြဲ) ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ခုချိန် စင်္ကာံပူက မြန်မာ ကိုအဖေခေါ်နေရတဲ့ အချိန်ရောက်နေပြီပေါ့ (စကားချပ် – ချိုချိုကျော်ငြိမ်းတို့ မပါ)
ဟုတ်တယ်ဗျို့ …..မြန်မာကားတွေထဲမှာ…သွပ်မိုးအိမ်တွေကိုဆင်းရဲသားအိမ်လို့ ရိုက်ရတယ်..
ခင်မမမျိုးတို့ကတော့ လုပ်ပြီ … အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်ပါသတဲ့ကွယ် … ။
မပြည်.တဲ. အိုးက ဗောင်ပင်ခတ် တယ်လို.ပြောရမှာပေါ.နော်
ကိုယ် တို့ လို ဆင်းရဲ သားတွေ ကို အဓိက ခြောက်လှန့် နေတာက ကုန်ဈေးနှုန်းပါပဲ။
၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေ မမျှတ မှု ပေါ့။ ကိုယ် သိရသလောက်တော့ တခြာနိုင်ငံတွေ ရဲ့ တစ်ရက် လုပ်အားခ က
လူနေမှုဘ၀ ကို ဖူလုံ ရုံမက ပိုလျှံ နေစေတဲ့ ထိ ရတယ်…တဲ့ကိုယ် တို့ ဆီမှာတော့….တစ်နေ့ လုပ်စာနဲ့ တစ်နေ့ထမင်းဝအောင်စားရဖို့တောင်အနိုင်နိုင်..။
မင်္ဂလာဒုံကနေ ဆူးလေ က အရောင်းဆိုကို အရောင်းစာရေး သွားလုပ်ရတဲ့မိန်းကလေး တချို့ ဆိုရင်….
ရတာ က လစာ….တစ်လ 45000 လောက်ပဲ။ ကားခ (ယာဉ်စီးခ) က အသွားအပြန် 400 ။
တစ်နေ့ဝင်ငွေ ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများကို ကားခ အဖြစ် ကုန်လိုက်ရတယ် ။ ကျန်တဲ့လုပ်အားခ ငွေနဲ့နေရေးထိုင်ရေး. ..စားရေး သောက်ရေး နဲ့ ကျန်းမာရေးတွေ ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ….။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူဦးရေ အများကြီးကိ တိုးတက်အောင်……..စီမံပေးနိုင်တယ်။ ကိုယ်တို့ နိုင်ငံမှာ… တရုတ်လောက် လူဦးရေ မများတဲ့ပြည်သူတွေ ထမင်းမ၀ ဘူး။ အာဟာရ မပြည့်ဝ ဘူး။
အားလုံး..အတွက် စဉ်းစားပေးကြပါ..လို့ဘယ်သူ့ ကိုပြောရမလဲ..။
ကိုယ် သိသလောက် တွေ လျှော်ပြောလိုက်ရရင်..ကိုယ်လည်းတော်တော် ….ပွကြီး ဖြစ်သွားမယ် ။ နိုင်ငံလည်းတော်တော် မွသွားတော့မယ် ။ ဒီလောက်ပဲ..ပြောတော့မယ် ။
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး မဖတ်ပဲနေမလို့ သူကြီးတင်တာမို့ ဖတ်လိုက်တာ ဖတ်ရကျိုးနပ်သွားတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ဆင်းရဲသားနဲ့ ကိုက်တာက သွပ်မိုးပါပဲ…။ ဘာလို့လဲဆို နေ၀န်းနီတို့ဆီမှာ သက်ငယ်ပေါ့လေ…။ တစ်ရာကို 15000 လောက်ဖြစ်နေပြီ..။ အိမ်ဘယ်လောက်ပဲသေးသေး သက်ငယ် ငါးရာခြောက်ရာကနေ တစ်ထောင်လောက်တော့ မိုးရတာပဲ..။ ၀ါးဈေးနှီး ဈေးကလည်း ကြီးသေး…….။ ပြီးတော့ နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင် နောက်တစ်တစ်ခါပြန်မိုးရပြန်ရော………။။
တော်တော်လေးကောင်းပြီးတော်တော်လေး ဗဟုသုတ ရပါတယ် သူကြီးရေး။
ဒီ ပိုစ့်လေးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါတို့ စစ်ဘောင်းဘီ ပုံစံပြောင်း အုပ်စုကို စော်ကားတာဘဲ
………..ထိပ်ပြောင် မျက်နှာပြောင် သိန်းဂိန်
ကိုယ့်အချင်းချင်း မျက်နှာအိုးမဲသုတ်ပြီး ချနေကြတဲ့
မီးမှန်အောင် တစ်ခုတည်း ဖြစ်သင့်တာလေးပြောကြည့်ပါလား
ဟိုက မလုပ်လို့ မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးကို ဟိုလိုလုပ်သင့်ပါတယ်
ဒီလိုလုပ်သင့်ပါတယ်လို့ ပြောတာကတော့ လွန်တာပေါ့
ပြည်သူတွေ တစ်ကယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပါတီတွေ အာဏာရသင့်ပါတယ်
ဂက်စ်ငွေ့တွေကနေ မြန်မာပြည်လျှပ်စစ်မီးတွေ အပြည့်အလျှံရသင့်ပါတယ်
နောက်ဆုံးပိတ် တွေရမယ်ဆိုရင်တော့ သွားကြားထိုးတံလုပ်တဲ့စက်ရုံလေးတစ်ရုံလည်း ရှိသင့်ပါတယ် ခင်ဗျား
အခုခေတ်ကဆိုက်ကားဆ၇ာတွေတောင် MP4နားထောင်ရင်း
ဘယ်လို ဘဲဖြစ်ပါစေ။ဆင်းရဲသားရာခိုင်နှုန်းနှစ်စဉ်တိုးလာတာ အားလုးံအသိပါ။အစိုးရသစ်ပြောနေတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးအစိအစဉ် ကစတောင်မစရသေးပါဘူး။မအောင်မြင်မယ့်ရာခိုင်နှုန်းက များနေတယ်။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ တကယ်အလုပ်လုပ်ကြရမယ့် လူတွေထဲမှာ အရှိအတိုင်းတင်ပြကြမယ့်အစား စာရင်းဇယား အလိမ်တွေတင်မယ့်လူတွေပါနေကြလို့ ပါ
ဒီခေတ်မှာ စာရင်းဇယား ဘယ်တော့မှ မှန်မှန်ကန်ကန် ရမှာ မဟုတ်ဘူး
အမြတ်ခွန် ဆိုတာ တမျိုး ..
လုပ်ငန်းခွန် ဆိုတာ တမျိုး ..
ရန်ပုံငွေ ဆိုတာ တမျိုး ..
ဒါတွေက သူတို့ကောက်ထားတဲ့ စာရင်းပေါ် မူတည်ပြီး ကောက်ခံကြ .. ဓါးပြ တိုက်ကြ .. အနုကြမ်း စီးကြ ဆိုတော့
ဘယ်တော့မှ အရှိအတိုင်း ရမှာ မဟုတ်ဘူး ..
အုပ်ချုပ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်လဲ ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး .. သူဌေးတွေလဲ ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး ..
“ ဆင်းရဲ နွမ်းပါး မှု လျှော့ချ ရေး ” ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မရှိဆင်းရဲ သူများ လည်း အကျိုးဖြစ်
ကိုယ့်အတွက် လည်း အကျိုးဖြစ် မယ့် စီမံကိန်းများ (ဥပမာ- နေ့ စဉ် သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း ပြန်ဆပ် ရတဲ့ အတိုးနည်း ချေးငွေ၊ မရှိဆင်းရဲသား များ လိုအပ်နေတဲ့ လူသုံးကုန် ပစ္စည်း များ၊အဝတ်အထည်များ အစရှိသဖြင့် ကို သင့်တင့်တဲ့ အတိုးနှုန်း အမြတ် ပေါင်းပြီး လပေး စနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း ၊ အစရှိသဖြင့် ) ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ် ဗျာ ။ ကျွန်တော့် မှာသာ ပိုက်ဆံ ပေါလို့ ကတော့ ၊ မင်္ဂလာဆောင်ချင်ပေမယ့် မင်္ဂလာဆောင် စရိတ် မရှိတဲ့ အပျို လူပျို တွေ ကို လစဉ် အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်ခိုင်းမယ့် ၊ မင်္ဂလာဆောင် စရိတ် ထုတ်ချေးပေးချင်တယ် ဗျို့ ။ ခက်တာ က ဒီသြဂုတ် ၁ ရက်နေ့ ထွက်တဲ့ ထီကလည်း မပေါက် ။ ဟူး…..ပိုက်ဆံ..ပိုက်ဆံ